Xildhibaano reer Seylac Ah Oo Raalli-gelin Ka Bixiyey Hadallo Kasoo Yeedhay Md. Cali Aareeye Oo Gobolka Selel Laga Soo Doortay | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xildhibaano reer Seylac Ah Oo Raalli-gelin Ka Bixiyey Hadallo Kasoo Yeedhay Md. Cali Aareeye Oo Gobolka Selel Laga Soo Doortay
September 5, 2016 - Written by Mustafe Faro
Xildhibaannada Iyo Madax-dhaqameed Wehelinayayba WAxay Bulshada Waqooyiga Maroodi-jeex Ka Xaal-mariyeen Hadallo Uu Xil. Aareeye Ku Duray
Saylac (Hubaal): Xubno isugu jira cuqaal, Salaadiin, Waayeel iyo xildhibaano ka soo jeedda gobolka Selel ayaa raali gelin ka bixiyay hadallo dhawaan ka soo yeedhay xildhibaan Cali Sheekh Ibraahim Aareeye, oo ka tirsan golaha Wakiiladda, isla markaana laga soo doortay gobolka Selel. Kaasi oo dhawaan mar uu magaaladda Boorama warbaahinta kula hadlay si xun dhaleecayn ugu jeediyay beesha degta woqooyiga gobolka Maroodijeex, oo uu ku tilmaamay beel aad u deris xun, isla markaana ay beeshaasi doonayso in ay xoog kaga qaadato dhul aanay lahayn beesha Saylac. Hase yeeshee xubnahan isugu jiray cuqaasha, Salaadiinta iyo xildhibaanadda ee ka soo jeedda gobolka Selel oo shalay shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa, ayaa sheegay in ay ka raali gelinayaan beesha woqooyiga gobolka Maroodijeex hadaladii deel-qaafka ahaa uu kula dul kufay xildhibaan Aareeye. Chief caaqil Cali Wabar Cawaale (Cali-furre), oo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Raali gelin ayaan ka bixinaynaa hadalkaa ka soo yeedhay xildhibaan Aaareeye, haddii ay Sacad Muuse tahay. Waa khalad arrintaasi uu ku hadlay xildhibaanku, cayduna waxba ma dawayso ee nabada ayaa wax daawaysa. Walaalahayo, wax na dhexyaalaa ma jiraan, hore-na waxba nooma dhex oolin, raali-na ha ka ahaadaan walaalahayo. Ta labaad, Muuse Biixi Cabdi, waa madaxweyne ILAAHAY ayaa doortay, oo Samadda ayaa laga dooray, af-lagaado nagama geyo, ka af-lagaadaynayaana nagama mid ah anaga”. Xildhibaan Axmed Yaasiin Barkhadle Bulaale, oo ka tirsan golaha degaanka Saylac, oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi “Waxaan ka jawaabay-naa af-lagaadadii iyo caydii uu u gaystay xildhibaan Aareeye, dadka walaalahayo ee aanu isku degaanka nahay ee ul iyo diirkeed nahay, ayaan raali gelin ka bixinaynaa. Beesha Sacad Muuse, ayaan raaligelin ka siinaynaa. Waa dad aanu walaalo nahay, dad ay wax na dhexyaalaana ma aha. Waxa uu yidhi Aareeye waxaa nasiib daran Ciisaha iyo Gadabuursiga jaarka la noqday Sacad Muuse, waxaana nasiib daran beesha Cali Aareeye xildhibaanka iyo siyaasiga u yahay”.
“Waxaanan leeyahay kii dadka isku soo dhawayn lahaa ayaad tahay, xildhibaan ayaad tahay hadalka xumina dadka wuu kala kaxeeyaa, beesha Ciise-na ninkii jabin jiray adiga ayuu ahaa doorashadii golaha Wakiilada-na adiga ayaa jabiyay beesha Ciise, doorashadii golihii degaanka dhibtii ka dhacday Saylac, adiga ayaa shiday maanta-na in aad dab shiddo waad ku tallo gashay, waanu ku baranay magaca Ciise ee aad dadka ku caayaysid-na kaa yeeli mayno” ayuu yidhi xildhibaan Bulaale.
Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay aqoon yahan Yuusuf Cawaale Daahir, oo ka mid ah aqoon yahanadda ka soo jeedda gobolka Selel, waxaanu sheegay in aanau xildhibaan Aareeye metelin, isla markaana ku hadli Karin af-ka beesha Ciise.
Isagoo xusay in ay xaal iyo raaligelin ka siinayaan beesha Sacad Muuse, hadaladdii xajiinta lahaa ee uu todobaadkii hore kula dul dhacay, isagoo tilmaamay in beesha woqooyiga gobolka Maroodijeex iyo beesha Selel ay yihiin dad walaalo ah, isla markaana wax dhibaato ah oo dhextaalaa aanay jirin.